Save your last dance for me - kookiebiscuit chocolatechip - Wattpad
Get notified when Save your last dance for me is updated
♥금 요 일 13♥ (Firday 13)
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အနာဂတ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပေးတဲ့ နေ့.
လှပတဲ့ အိမ်မက်များသာ သူမအတွက်
သူမမျက်ရည်တစ်စက်ဟာ သူ့အနာဂတ် ကို
ဆုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တဲ့ သူ ......
❤Forever With You❤[Completed]
BTS-Jimin Fan fic
Jimin & Jung Kook are the heirs of Miracle Corporation. Jimin hasafriend called SuYoon. He is crush on her. But Suyoon is crush on Jung Kook. One day, he meetamessy girl called Army. Jimin & Army get marry without love. But when the real feeling of them came............
Enjoy my fic. Don't forget to vote ok. Thanks...
Our Young Love (Completed)
You're so beautiful(ရုပ်ဆိုးမလေးကိုယ့်ချစ်သူ)
BTS (Vkook )
Actors ; V & Jimin
Actresses ; Jung kook & J hope :
Thanks u readers nim
Cuz U are My Official Stalker
Lee Rae Hee က Jung Kook ကို ၃ နှစ်လောက် stalk လာတဲ့ ကောင်မလေးပါ… ဒါပေမဲ့ Jung Kook ကို သူ့ကို ၁ ချက်လောက်တောင် ဂရုမစိုက်ပါဘူး… တစ်နေ့ Jung Kook မှာ ချစ်ရတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာ သိသွားတဲ့ အချိန်မှာ….
သူတို့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မှာလဲ??? Sehun နဲ့ကရော?? V က ​ရော သူ မ ကို ဘယ်​ လို သ ​ဘော ထား သ လဲ?? မထင်မှတ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကြောင့် ဘာတွေ ဖြစ်လာမှာလဲ???